पक्षाघातका बिरामीलाई थेरापी- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
पक्षाघातका बिरामीलाई थेरापी
बागलुङ — दैनिक क्रियाकलाप गर्न नसक्ने बालबालिका भएका घरमा परिवारका सदस्य तनावमा रहन्छन् । त्यस्ता बालबालिकाको स्याहारमा परिवारको एकजना सदस्य खटिनुपर्छ ।
बागलुङमा मस्तिष्क पक्षाघात भएका बालकको स्वास्थ्य जाँच गर्दै डा. प्रज्ञा कर्माचार्य । तस्बिर : प्रकाश बराल
मस्तिष्क पक्षाघातपीडित बालबलिकाको अवस्थामा सुधार ल्याउन मस्तिष्क पक्षाघात स्वाबलम्बन समूह सक्रिय रहेको छ । समूहका अनुसार सामान्य उपचार र नियमित फिजियोथेरापीबाट त्यस्ता बालबालिकाको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
सदरमुकाम नजिकै रातमाटाका १३ वर्षीय प्रसन्न सापकोटा हिँड्न सक्दैनन् । शरीर कुप्रो हुन्छ । उनी अझै ओच्छ्यानमै रहेकाले पढाइसमेत प्रभावित भएको छ । उनी जन्मँदा सामान्य नै थिए । पछि समस्या देखापरेको हो । अभिभावकले उपचारका लागि धेरैतिर देखाए पनि बिसेक नभएपछि निरास थिए । हाल फिजियोथेरापी गराउन सुरु गरेपछि अवस्थामा सुधार आएको छ ।
जन्मने बेलामा ठोक्किएको वा आमाको पेटमा हुँदा कुनै असर परेमा मस्तिष्क पक्षाघात हुने बालरोग विशेषज्ञ डा. प्रज्ञा कर्माचार्यले बताउँछिन् । ‘कारणहरू विभिन्न हुनसक्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘पूर्णरूपमा निको पार्न नसके पनि थेरापीले पुरानो अवस्थाभन्दा अलि सुधार ल्याउँछ ।’
पीडितले आफ्ना सामान्य क्रियाकलाप आफैं गर्नसक्ने बनाउन थेरापीले मद्धत गर्ने उनले बताइन् । मस्तिष्क पक्षाघात स्वाबलम्बन समूहले सापकोटाको उपचार सुरु गरेको हो । फिजियोथेरापीले अवस्थामा सुधार गरेर सापकोटालाई आफैं उठेर बस्न र पढ्न सक्ने बनाउन स्वयंसेवीको समूह लागिपरेको छ ।
पाप्पा घर भई २७ वर्षदेखि ज्याला मजदुरी गर्दै आएका बुद्ध थापालाई पनि छोरी वर्षाको समस्याले सताएको छ । ६ वर्षकी छोरीको हातखुट्टा लुलो भएकाले बोकेरै हिँड्नुपर्ने र दिसापिसाब तर्काउन समस्या भएको थापाले गुनासो गरे । उनको अवस्था सुधारका लागि पनि डा. कर्माचार्यले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण थालिएको बताइन् । अपांग भन्दै घरभित्र थुनेर राख्ने अवस्था समाप्त भएको भन्दै उनले अभिभावकलाई हौसला पनि दिने गरेकी छन् ।
जन्मेको समयमा टाउको ठोक्किएका र मस्तिष्कमा अक्सिजनको कमीले यस्तो अवस्था आउने गर्छ । उपचार र फिजियोथेरापीबाट त्यस्ताको समस्या कम गर्न सकिने फिजियोथेरापिस्ट मनीषा लाखेले बताइन् । ‘समस्या भएका बालबालिकालाई कम्तीमा एक तह सुधार गर्न सक्छौं,’ उनले भनिन्, ‘मस्तिष्क पक्षघातका विभिन्न अवस्थामध्ये सुधार हुनसक्ने अवस्थामा बिरामी पहिचान गरेर उनीहरूलाई थेरापीका माध्यमबाट उपचार गर्न सकिन्छ ।’
यस्ता समस्या भएका करिब २० जना बालबालिकालाई नियमित उपचार र अनुगमन गरिरहेको उनले बताइन । समूहले आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका सदस्यलाई ९० प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा औषधि र उपचार दिने गरेको छ । त्यस्ता बालबालिकालाई स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा ल्याउन शिविर पनि आयोजना गर्ने गरिएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार मस्तिष्क पक्षघात भएपछि बालबालिकाको हातखुट्टा चाहिनेभन्दा बढी लुलो हुने वा दह्रो भएर टेक्न, काम गर्न र हिँड्न नसक्ने हुन्छन् । साथै कसैको बोली नफुट्ने र शरीर सन्तुलनमा राख्न नसक्ने हुने गर्छ ।
उपचारपछि धेरै बालबालिका विद्यालय जान थालिसकेको स्पिच थेरापिष्ट मेधा कोइरालाले बताइन् । ‘गर्भावस्थामा नियमित परीक्षण गर्ने र स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितिमा मात्र सुत्केरी गराउने गरियो भने बालबालिकामा त्यस्ता समस्या आउँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘केही वंशाणुगत समस्याबाहेक अरू सबै हाम्रो सतर्कताले समाधान हुन सक्छन् ।’
प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ १०:१०
कालीगण्डकीमा थपिँदै आयोजना
बेनी–जोमसोम सडकको ४० किलोमिटर खण्ड भएर बग्ने कालीगण्डकी किनारामा ८ जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने
पछिल्लो आयोजनामा ५८ मेगावाट क्षमताको तिप्ल्याङ–कालीगण्डकी हाइड्रोपावर
भाद्र २२, २०७५ घनश्याम खडका
म्याग्दी — जिल्लाको उत्तरी भेगमा भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीमा अर्को जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ ।
बेनी–जोमसोम सडकको बेनी–घाँसा ४० किलोमिटर खण्ड भएर बग्ने कालीगण्डकी किनारामा कम्तीमा ८ जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएका छन् ।
पछिल्लो आयोजनाका रूपमा तिप्ल्याङ–कालीगण्डकी हाइड्रोपावरले अन्नपूर्ण गाउँपालिका ६ पोखरेबगरमा बाँध बनाई रघुगंंगा गाउँपालिका १ तिप्ल्याङ नजिक विद्युत् गृह बनाई ५८ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् निर्माण गर्न अनुमति लिएको छ ।
व्यवसायी चन्द्र ढकाल नेतृत्वको तिप्ल्याङ कालीगण्डकी हाइड्रो प्रालि काठमाडाैंले बिहीबार प्रभावित क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । स्थानीयले आयोजनाबाट इन्टेकमा पर्ने अन्नपूर्ण गाउँपालिका ६ रातोपानीस्थित तातोपानी मुहान मासिने भन्दै री–एलाइन्मेन्ट गर्न सुझाएका छन् ।
‘आयोजनाले सार्वजनिक गरेको ईआईए रिपोर्ट पारदर्शी र सबैले बुझ्ने प्रकारको छैन । प्रस्तावित एलाइन्मेन्टले तातोपानी नाश हुने पक्का छ,’ सार्वजनिक सुनुवाइका सहभागी स्थानीय खड्ग गिरीले भने, ‘आयोजनाबाट तातोपानीको मुहानमा असर नगर्ने प्रष्ट तर्क आएको छैन । हामी आयोजनाविरोधी होइनौं तर जनताले सजिलोसँग बुझ्ने गरी कुरा आउनुपर्‍यो ।’
प्रस्तावित तिप्ल्याङ कालीगण्डकीभन्दा २ किमि तल ट्रेडलिंक ग्लोबल प्रालिले ६५ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी अपर र माथि हाइड्रो सपोर्ट प्रालिले ५३ मेगावाटको मध्यकालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएका छन् ।
त्यसैगरी अन्नपूर्ण गाउँपालिका ४ नारच्याङमा पर्ने कालीगण्डकीको सानो सहायक घलेम्दी खोलामा अर्को ९.१४ मेगावाट क्षमताको सुपर घलेम्दी जलविद्युत् आयोजनाले भदौ पहिलो साता विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरेको छ । घलेम्दी खोलामा ५ मेगावाट क्षमताको छुट्टै निर्माणाधीन घलेम्दी जलविद्युत् आयोजनाले असोजमा विद्युत् उत्पादन थाल्दैछ ।
सोही ठाउँमा ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला, १४ मेगावाटको घारखोला, ९१ मेगावाटको नीलगिरि क्यास्केट जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिका ३ र ४ मा १ सय ६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज निर्माण गर्न हालै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा सम्झौता नै भइसकेको छ ।
प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ १०:०९